Sekoly tsy miankina: 25% ny tahan’ny fiverenana an-dakilasy ho an’ny 2020-2021 | NewsMada
Efa any an-dakilasy, amin’izao fotoana izao, ny mpianatra eny amin’ny sekoly tsy miankina misantatra ny taom-pianarana vaovao 2020 – 2021. Betsaka ireo sekoly nitondra faisana noho ny valanaretina. Ny ray aman-dreny koa tojo fahasahiranana ka nampiato ny fianaran-janany.
Nanapa-kevitra ny hisantatra ny taom-pianarana 2020-2021, ny fiandohan’ny herinandro teo ireo sekoly 400 tsy miankina mivondrona ao anatin’ny Association des instituts laïques pour l’éducation (AILE) manerana ny Nosy, araka ny fanazavan’ny tale nasionaliny, Rakotomalala Célin, omaly. Satria ny minisitra vaovao misahana ny Fanabeazam-pirenena, nilaza fa notazonina ny tetiandro teo aloha ary mifarana ny 30 jona lasa teo ny taom-pianarana 2019-2020 ary roa volana sy tapany aorian’izay no misokatra ny taom-pianarana vaovao. Ireo kilasy « intermédiaire » no miditra tamin’ity herinandro ity fa ireo mbola miatrika ny fanadinam-panjakana BEPC sy bakalorea, ny volana novambra vao hiverina an-dakilasy. Raha ny zavatra tsapa taorian’ny fandraisana ny fisoratana anarana ho an’ny taom-pianarana vaovao, 25% sisa ny tahan’ny mpianatra niverina an-tsekoly fa sahirana ny ray aman-dreny ka tsy afa-manoatra izy ireo. Tranga iraisan’ny ankamaroan’ny sekoly tsy miankina ireo manoloana ny krizy ara-pahasalamana nitarika krizy sosialy sy ara-toekarena teto amintsika. Manarina ny fari-pahaizan’ny mpianatra no himasoana voalohany aloha amin’izao fidirana izao.
Noterena ny sekoly hanome ny taratasy fiantsoana
Nisedra olana lehibe koa ny sekoly tsy miankina manoloana ireo mpiadina tamin’ny fanadinana CEPE. Maro tamin’ireo ray aman-dreny no nanery fotsiny ny talen-tsekoly hanome ny taratasy fiantsoana mandritra ny CEPE nefa tsy nanefa ny saram-pianarana feno. Taorian’ny kabarin’ny filoha momba ny tsy tokony hihazonana ny taratasy fiantsoana, nanararaotra ireo ray aman-dreny tsy nitsinjo ny karaman’ny mpampianatra, hoy ny fanambarany. Lasa nibaby vesatra lehibe ny sekoly vokatr’izay. Ny ankamaroan’ny sekoly tsy miankina tany Atsimondrano tsy nanao famerenana mialoha ny fanadinana CEPE satria tsy nanam-bola hanakaramana mpampianatra intsony ny tompon-tsekoly. Nisedra avy hatrany ny CEPE ireo mpiadina rehetra.